Iindaba -U-Chuangmei okrelekrele uthathe inxaxheba kumboniso we-5 wezoRhwebo lweHlabathi weZinto zokuThintela uBhubhane.
“IBelt kunye neNdlela”（Isifinyezo: I-B & R）ligama elifutshane “Indlela yeSilk yezoQoqosho yeNdlela” njengo “kwinkulungwane yama-21 yolwandle indlela yeSilika”. Kwaye linyathelo elaphakanyiswa nguMongameli wase-China uJinping Xi ngo-Septemba nango-Okthobha u-2013.“IBelt kunye neNdlela” ihamba kwilizwekazi laseAsia, iYurophu neAfrika kwaye ibandakanya amazwe ayi-136 okanye imimandla njengamalungu ayo. Kuxhomekeka kwiipaseji zomhlaba kumhlaba kwaye kuthatha amachweba abalulekileyo elwandle njengeendawo. Kwaye iya kuxhomekeka ngokufanelekileyo kwiinkqubo ezikhoyo zamazwe amabini phakathi kwe China kunye namazwe ahambelana ngokwaneleyo kwaye ifumane inkxaso kumaqonga asebenzisanayo asebenzayo asebenzayo okuphucula ubudlelwane bezoqoqosho kunye namazwe akwi-Belt kunye neNdlela ngamandla nokwakha uluntu olunomdla ekwabelwana ngalo, ekwabelwana ngalo Ixesha elizayo kunye noxanduva ekwabelwana ngalo olubonakaliswa kukuthembana kwezopolitiko, umanyano lwezoqoqosho kunye nokubandakanywa kwenkcubeko.
Xa ujamelene nobhubhane wenovela coronavirus kunye nokunqongophala kwezixhobo zokuthintela ubhubhane kwihlabathi, iChina ivule amajelo oshishino ekuthumeleni ngaphandle izixhobo ezingxamisekileyo zokukhusela kunye nezinto zonyango kunye nezixhobo zamanye amazwe ngenxa yokuphunyezwa kwe “IBelt kunye neNdlela”.
U-Chuangmei Intelligent uthathe inxaxheba kumboniso wesihlanu wezoRhwebo lweHlabathi weZinto zokuThintela uBhubhane weZinto zokuthintela izixhobo kunye nenitrile / latex / PVC umgca wemveliso yeglavu ukusuka ngoMeyi 31, 2021 ukuya ku-Epreli 1, 2021.
Ngethuba lomboniso, inkampani yethu ibonakalise izixhobo zokuvelisa isikhuseli se-nitrile esitsha esenziwe ngoyilo lwesandla esenziwe ngezandla ezimbini, kunye nemveliso yemihla ngemihla engama-500,000; seemodyuli, imveliso mveliso, on-site ibandla kunye welding, ixesha ufakelo ngokukhawuleza; Inkqubo yokuhambisa umoya oshushu, ukonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo. Zombini i-PU zokutyabeka kunye nenkqubo yokuhlamba iklorine inokuhlangabezana neemfuno zokugqibela zeigloves ezahlukeneyo.Izixhobo zethu zeMveliso zeglavu ziye zatsala abathengi abaninzi, ngethemba lokwakha umgca wemveliso yeglavu kwilizwe labo.